ko htike's prosaic collection: မြန်မာပြည်သား တစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်သံ
ခေတ်အဆက်ဆက်ရှေ့ထွက်ရပ်တဲ့ အမာခံကျောင်းသားလူငယ်တွေကို သွေးကွဲစေဖို့ မလိုအပ်တဲ့ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာဖြုန်းတီးမှုကြီးအဖြစ် မြို့ပြင်၊ မြို့စွန်တွေမှာ တက္ကသိုလ်အသစ်တွေကို သွားတည်ခဲ့ကြတယ်။ ရှိရင်းစွဲ အထင်ကရ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ အတုအယောင် ဆရာအတုတွေနဲ့ ဘွဲ့ကြီးတွေကို ထားခဲ့ကြတယ်။ အရည်အချင်း မရှိဘဲ ရခဲ့ကြတဲ့Master တွေ Ph.D တွေ ပေးနေလိုက်ကြတာ၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးသမီး Ph.D ဘွဲ့ရသွား ခဲ့တယ်။ ဆရာကြီးဒေါက်တာ သန်းထွန်းက ပြောသွားခဲ့ဘူးတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ သုတေသနမရှိ၊ ကျမ်းပြုမရှိဘဲနဲ့ ဆရာတွေက နံရံဆေးသုတ်၊ ခြံစည်းရိုးခတ်နဲ့၊ ကျောင်းလုံခြုံရေးတွေသာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ Master အတွက်ကျမ်းပြု (copy) လုပ်ရာမှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာကို ကိုယ်တိုင်မရေးနိုင်လို့ ပြင်ပစာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများထံမှာ ငွေပေးရေးခိုင်းနေရ တာလည်း လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးဆိုသူတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သတင်းပေးသက်သက် လုပ်နေရပြီးကျောင်းတွေမှာလည်း နေသာတဲ့အချိန်မှာသာ ကျောင်းပေါက်ဝထိုင်ပြီး ကျောင်းသာကဒ်ချိတ်မချိတ်၊ အ၀တ်အစားဘယ်လိုဝတ်သလဲ၊ ဆိုတာလောက်လိုက်ကြည့် လူလုံးပြလူရာဝင်နေကြရတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ မျိုးဆက် ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ပညာတတ်ဆိုရင် အသည်းနာနေကြပြီး လူငယ်တွေ ပညာမတတ်၊ ပညာငတ်နေကြရအောင် လုပ်လိုကြခြင်းဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကျောင်းသားထုကြီးအပေါ် လက်စားချေခြင်းတစ်မျိုးဆိုတာ နားလည်ထားပြီးသားပါ။
စာဖတ်သူများအား အောက်ပါစကားလုံးများကို ရေးရတဲ့အတွက် ကန်တော့မိပါရဲ့။ ပြည်သူကြားက ဒေါသ ကြောင့် ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသမီးအတွက် ထောပနာစကားက “စိန်စီသော ဖာသည်မ” တဲ့။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရေ ခင်ဗျားအတွက် ခင်ဗျားရဲ့ ချစ်သမီးရတနာက သောက်ရှက်ကို ခွဲတော့တာပါဘဲ။ မလှပတဲ့ ခင်ဗျားတို့ မျိုးရိုးရုပ်ကို ဖုံးနိုင်ဖို့ အတွက် စိန်ရတနာတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စိန်ရတနာတွေလည်း မကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကတော့ ကြွားချင်လှတဲ့ ခင်ဗျားသမီးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ကင်မရာသမားတွေဟာ ကိုယ်လုံးပေါ်အောင် ရိုက်ရတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမှ ဖုံးလို့မရအောင် စူထွက်နေတဲ့ ခင်ဗျားသမီးရဲ့ “ဗိုက်”အလှပါပဲ။ ဒီဗိုက်ထဲက မယူရသေးခင် ပူထွက်နေတဲ့ကလေးဟာ မချိပြုံး ပြုံးနေတဲ့ သတို့သားရဲ့ ကလေးမဟုတ်ဘူးးဆိုတာကို လူတိုင်း အသိပါ။ ခင်ဗျားရောသိပါလေစ။ ခင်ဗျားတို့ချင်း သုတ်သင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးရဲ့ မြေးလေးတဲ့။ ခင်ဗျားသမီး နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာ အတင်းကာရော ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူး ရယူပြီး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း မိန်းမရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးသားနောက် လျှောက်လိုက်နေတယ် ဆိုတဲ့သတင်းကလည်း လူတိုင်းသိနေပြီးကြပြီ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းချက်ကတော့ အံ့ပါရဲ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးဟာ ခင်ဗျားတို့ထံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ ဒါဟာ ၀ဋ်လည်တာမဟုတ်ဘူး ကွ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ လို့သာ ကြုံးအော်လိုက်ကြပါတော့။
ထေရ၀ါဒ အဓွန့်အရှည်ဆုံး၊ အထွန်းကားဆုံးတိုင်းပြည်၊ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာပါလို့ ကြွေးကြော်နေပြီး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရက်ရက်ရောရော လှူလိုက်တဲ့ နံပါတ်တုတ်၊ ၀ါးရင်းတုတ် ရိုက်ချက်တွေဗျာ၊ သံဃာတော်တွေမှာ အတုံးအရုံး ဖြစ်၊ သင်းပိုင်ကျွတ်နဲ့ ထွက်ပြေးနေရရှာတဲ့ ကိုယ်တော်ရဲ့ သင်္ဃန်းကိုဆောင့်ဆွဲပြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ်လှူနေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ဒုတ်ဒါနအလှူတွေကို တကမ္ဘာလုံးက အံ့သြထိတ်လန့်၊ တုန်လှုပ်ရအောင်လည်း မြင်ခဲ့ကြရပါပြီ။
I can't stop reading this latest Blog. Its great, whoever wrote this is very witty and hasagreat sense of humor.
??????? ???? said...
ထိုးထွင်းမြင်တတ်ရုံတင် မကဘူး၊ ပုံဖော်ရေးသားနိုင်စွမ်း လည်း မြင့်မားလှပါတယ်။
အားလုံး ခံစားရတာ ကို အိပ်ဖြေချလိုက်သလိုပါပဲ။
ko htike, i always read your blog but i extremely felt at this time ..i could assure that everybody hasasense like me.You areagreat blogger.i really appreciate your effort.Thanks for all you have done.
19 October 2007 at 11:39
This article should be announced in BBC, VOA & RFA burmese program so that Junta family will know it. Very Good Article.
Thanks for writing and Posting!!!
i really fascinated about your lastest blog.i totally agree with this blog.i always read your blog. with many respects for your patriotism
တတ်ပါ။ စကြာဝဠာအလုံးပြည့် မုသားဝါဒ အတင်းညာတဲ့ အတင်း
စာမှာရေးနေကြတဲ့-ကလေကချေ-စာဝင်ရေးနေတဲ့-၀ံကြီး ကျော်ဆန်း (၀န်ကြီးရာထူးနဲ့မတန်လို့) ရဲ့ဂွေးစိကိုင်တွေနဲ့တော့-နံသာဆီနဲ့အီးလိုကွာပါတယ်။ မင်းသစ်တည်ရေ ဒီလို ခပ်ကြမ်းကြမ်းမျိုးတွေရေးပါဦး။ အားပေးပါတယ်။
20 October 2007 at 02:54
kyaw lin tun said...
本当に　いい　です。
20 October 2007 at 03:48
Thanks for sharing the very detail facts to the world. This is very good one.
Minn Thit Te
I promise that I keep this article in my archive and try to reach it within the people as well as the soldiers who are in Burma.
20 October 2007 at 08:52
`သွေးနွံအိုင်´ဆိုတဲ့ဝေါဟာရက အရမ်းထိမိပါတရ်. အဲဒီ့စကားလုံးကိုတွေ့ တိုင်း ၀မ်းနည်းစွာခံစားရပါတရ်.
20 October 2007 at 22:49
Min Thit Te,
Your article is so brilliant I copied it and distributed to all my friends .
It is so true and moving for us all.
20 October 2007 at 23:36
It isamasterpiece! Presentation ofagenius! Two thumbs up.
☆♀ 視訊影音聊天 ☆♀☆♀ 夜未眠成人影城 ☆♀情色短片☆♀ 免費網友自拍影片 ☆♀☆♀免費視訊交友聊天室 ☆♀☆♀ 情色電影院☆♀☆♀ 限制級影片 ☆♀☆♀ 限制級影片 ☆痘痘聊天室☆♀ 成人聊天網 ☆♀☆♀ 成人影片 ☆♀☆♀ av女優影片 ☆♀三級電影av情色網☆♀ 成人影視☆♀色咪咪影片網sex5220免費影片尋夢園上班族聊天室影音視訊聊天室ut聊天聯盟電愛聊天室琉璃仙境聊天室080苗栗聊天室sm聊天室桃園聊天室一夜情援交聊天室情色皇朝聊天室愛情紅綠燈視訊網愛交流區哈啦聊天室免費正妹視訊熱舞秀買春視訊視訊網愛聊天室蠻女都會男女視訊聊天室妹妹影音視訊聊天室即時通視訊女郎視訊館上班族1對1視訊視訊美女館主播情人視訊辣妹妹影音視訊聊天室激情網愛聊天免費UT視訊交友亞洲情色視訊交友s383情人視訊甜心寶貝直播免費aa片試看sex520免費影片免費自拍情色電影偷窺大本營台灣妹妹情色貼圖gir貼圖下載區激情成人網愛聊天室檳榔西施自拍照片寶貝馬子貼圖網金瓶梅貼圖007成人網情色貼圖台灣無限貼圖區美女工廠貼圖區無名辣妹自拍自拍偷窺貼圖區亞洲超人氣情色貼圖歐美街頭自拍蟲蟲聊天室特兒素人自拍貼圖八國聯軍成人自拍貼圖區ㄧ葉晴成人貼圖片區唯我獨尊成人貼圖片區愛愛成人貼圖片區香港護士自拍貼圖區成人美少女自拍貼圖淫蕩天使情色網小魔女自摸自拍自拍做愛貼圖一夜情聊天室104自拍美女貼圖本土自拍寫真情色典獄長天使情色貼圖女孩自拍淫蕩天使情色貼圖成人貼圖站激情自拍館網友自拍,真實自拍貼圖成人自拍,網友自拍自拍盜攝館愛情公寓聊天室高雄一夜情聊天室學生族視訊BT成人論壇月光情色論壇愛情花園聊天室Girl美女視訊聊天室嗆辣妹影音視訊聊天室臺灣情色論壇香草蜜糖情色網水都情色論壇sm聊天室玫瑰公爵成人論壇洪爺情色論壇淫美成人論壇舞之心情色論壇辛辣論壇,東東成人論壇櫻桃不夜城情色論壇私密論壇激情網愛聊天-成人視訊聊天室優質辣妹影音視訊聊天室禁忌挑逗激情聊天室123上班族聊天室台北一夜激情聊天室dodo成人聊天室影音視訊聊天情人網辣妹影音視訊聊天室我愛78論壇素人自拍短片免費視訊辣妹脫衣互動秀